Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Fampitandremana momba ny fiarovana ny fiaramanidina: Aza apetraka amin'ny American Airlines ny fianakavianao
“Raha miahiahy ny amin'ny fiarovana ny fianakavianao ianao dia aza asiana sidina amerikanina mandra-pahatongan'ity didim-pitsarana ity.”
Miaraka amin'ny famoahana didy navoakan'ny mpitsara amerikanina amerikana, ny mekanika ao amin'ny American Airlines izay mahatsikaritra ny harafesina dia tsy tokony hiahiahy fotsiny amin'ny fahaverezan'ny asany fa ankehitriny kosa tokony hanahy ny amin'ny fanenjehana sazy na fanagadrana azy. Ity no fandikana nataon'ny talen'ny nasionalin'ny Aircraft Mechanics Fraternal Association Bret Oestreich.
Ny mpitsara federaly dia namoaka ity didy fandrarana ny zoma ity mandrara ny mekanikan'ny American Airlines tsy hiditra an-tsehatra amin'ny fiasan'ny fiaramanidina. Notorian'ilay zotram-piaramanidina ny mekanika tamin'ny volana Mey ary notondroin'izy ireo ho nanao fihemorana amin'ny asa tsy ara-dalàna izy ireo rehefa nijanona ny fifampiraharahana.
Namoaka izany fanambarana izany izy.
Mamaly ny didy fameperana vonjimaika navoaka ny 14 Jona 2019, noho ny fangatahan'ny American Airlines, ny talen'ny nasionalin'ny Aircraft mekanika Fraternal Association (AMFA), Bret Oestreich, dia niantso ny mpikambana ao amin'ny Fikambanana mba tsy hisidina amin'ny American Airline
"Ny fanadihadian'ny FAA sy ny tatitry ny CBS News dia manamarina fa ny amerikanina dia niasa tamina kolontsaina fiarovana fikojakojana marim-pototra nandritra ny taona maro niaraka tamin'ny fitantananan'ny mpitantana fomba fanerena mba hanakanana ny tatitra momba ny fahasimban'ny fiaramanidina. Miaraka amin'ny famoahana ity didy ity dia tsy tokony hiahiahy amin'ny fahaverezan'ny asa fotsiny ny mekanika mahita ny fahasimbana. Hanahy izy ny hiatrika lamandy na higadra. ”
Oestreich dia nampitandrina ireo mpikambana efa ho 3,500 XNUMX an'ny AMFA ao amin'ny Southwest Airlines sy Alaska Airlines: "Raha miahy ny fiarovana ny fianakavianao ianao dia aza apetraka amin'ny sidina American Airlines raha tsy miala io didy io." Oestreich dia nanonona antontan-taratasy FAA manokana momba ny ezaky ny Amerikanina hanakana ny tatitra momba ny fahasimban'ny fiaramanidina, ao anatin'izany
 Taratasy nosoratan'i H. Clayton Foushee, talen'ny fanaraha-maso sy fanombanana ny FAA, tamin'ny 25 martsa 2015, nitanisa “fanadihadiana fakan-tahaka” izay nanaporofoan'ireo mpikaroka federaly fa ny fitantanana amerikana dia “nanery [mekanika] tsy hanoratra ireo tsy fitoviana, maka hitsin-dalana miaraka amin'ny fikojakojana hetsika, na sonia tsy ara-dalàna amin'ny asa izay tsy vita. ... 1
 Fahitana FAA iray voaresaka tao amin'ilay memoara iray ihany fa ny tontolon'ny faneriterena dia “mety hiely be manerana ny fikambanana amerikanina noho ny fiampangana an'ilay mpitaraina [sic], izay misy fiatraikany amin'ny asa fikojakojana any Dallas, New York, Miami sy ny sisa. Ankoatr'izay, misy ny fisehoan-javatra matanjaka fa tsy nanao fitsirihana fitokonana varatra nandritra ny fotoana maharitra ny Amerikanina. ”
 Tatitry ny famotopotorana FAA tamin'ny 27 Febroary 2015, izay namaritra: "Ny mekanika amerikanina amerikana dia noterena noho ny enta-mavesatra ara-tsaina tamin'ny alàlan'ny fametraham-pahefana ara-tsosialy na ara-toekarena napetraka taminy. Ny mekanika dia noterena hiala amin'ny fomba fikojakojana sy / na tsy hanoratra ny tsy fitoviana / tsy fahampiana.
NY SAFETY AO AMIN'NY ARIAMANITRA MANOMBOKA AMIN'NY FITANDREMANA MITSITRITRA ETO AMIN'NY TANORA Ny vokatry ny fanerena dia misy fiatraikany mivantana amin'ny fiarovana ... Navoaka tamin'ny NAS ny fiaramanidina amin'ny toe-piainana tsy mendrika na tsy mahafeno ny endriny.
2  Ilay tatitry ny fanadihadiana nataon'ny FAA ihany dia nanaporofo ny fiampangana fa ny talen'ny Regional Maintenance Evita Rodriguez dia nanome torolàlana an'ireo teknisianina mpikarakara fiaramanidina amerikana: "Mila mandanjalanja ny fiarovana sy ny vokatra. Rehefa nijanona tao amin'ny JFK aho dia nanao sonia ny tonga tamin'ny Airbus, nefa tsy nanao izany mihitsy. Mitady izany fifandanjana izany aho. ” Raha tokony hofehezina ity mpitantana ity dia natolotry ny Amerikana azy - i Evita Garces ankehitriny - ho talen'ny Maintenance ho an'ny kaompaniam-pitaterana manontolo.
3  Fanadihadiana mahaleo tena nataon'ny FAA tamin'ny 1 Jona 2015, nanaporofo ny fiampangana fa ny mpiasa mpikojakoja dia "noterena tsy hanoratra ny tsy fitoviana hita… Ny mekanika dia nahazo tsindry avy amin'ny mpiandraikitra mpanara-maso ny habetsaky ny karazana fifandonana voasoratra nandritra ny fizahana ny fiaramanidina B." Ary koa: "Ireo mpiasa mpikirakira [dia] noterena hiala tamin'ny fomba fikojakojana… ny mekanika dia nahazo tsindry avy amin'ny mpiasa mpanara-maso ka hatramin'ny fomba fikojakojana ny hitsin-dàlana."
4  Vao tsy ela akory izay, ny tatitry ny fanadihadiana nataon'ny FAA 2017 momba ny toby amerikanina any Miami dia nanatsoaka hevitra fa ny teknisianina misahana ny fikajiana fiaramanidina dia iharan'ny valifaty satria ilay mekanika “dia niteraka… valim-pikarohana marobe [izay] niafara tamin'ny fanesorana ny seranam-piaramanidina iray hatramin'ny nisian'ny Base Miami Tsy manana ny solon'izy ireo amin'ny tahiry na ny fahaizana manamboatra ny simba voasoratra. ”
5  Io tatitra io ihany dia nahitana fa ireo teknisianina monina ao Miami rehetra nitafatafa nataon'ny ekipa mpanao famotorana FAA dia nitatitra fa, "nino izy ireo fa azo esorina amin'ny ekipa nomena azy ireo koa izy ireo tamin'ny alàlan'ny fizotran'ny tolo-bidy raha toa ka voarakitra an-tsoratra ny valin'ny [fahasimban'ny fiaramanidina]."
6 “Vao tamin'ity herinandro ity, nandefa horonantsary fakana sary an-tsary ny mpitantana amerikanina iray nanoratra injeniera niaraka tamin'ny fitenenan-dratsy ratsy ny fahitalavitra iray tao Chicago, vokatry ny tatitra nataon'ny teknisiana mpikarakara ny fiaramanidina momba ny fahasimban'ny fiaramanidina. Maniry aho ny hiteny hoe tsy dia nisy loatra ny fifanandrinana toy izany, saingy ny fanerena hamerenana ireo fiaramanidina hiverina ho any amin'ny serivisy dia mety ho goavambe. Vao mainka niharatsy izany ny baikon'ny Amerikanina. ”
Vintana farany hahitan'ny mpizahatany ranomandry any Newfoundland na Labrador?